Amalensi ombala ayindlela enhle yokushintsha ukubukeka kwakho futhi alungise amehlo akho. Kubalulekile ukukhetha umkhiqizi we-optics ozohlinzeka ngomkhiqizo wekhwalithi. Phela, sikhuluma ngesitho esibaluleke kakhulu emzimbeni womuntu. Uma usebenzisa amalensi udinga ukwazi imithetho ethile kanye nezici zamasokisi. Kulesi sihloko sizocubungula ama-lens ezinemibala "I-Ophthalmic Colors". Izimpendulo zabanikazi zaba yisisekelo sokubhala lesi sihloko.
I-ophthalmix i-Colors lens yakhiqizwa inkampani yaseKorea. I-firm ikhona kusukela ngo-1997. Umkhiqizo ungozingeni eliphezulu futhi ungashintsha umbala wemvelo wamehlo. Kuthengiswa kukhona amalensi omkhosi ongavamile wokudala abafundi bezilwane neminye imiphumela yamehlo. Kukhona amalensi kokubili ngaphandle kwamandla optical, futhi kungenzeka ukuthi ukulungiswa kombono. Ungayidibanisi ama-lens ombala nomthunzi. Lezi zinsuku azishintshi kakhulu umbala wemvelo wamehlo.
Indaba - Polyhemu.
Kukhona isihlungi se-UV.
Isikhathi sokufaka izinyanga ezintathu.
Iphakheji liqukethe amabhuleki amabili.
Isikhathi sosuku lokugqoka usuku.
Ububanzi be-lens buyi-1 cm 45 mm.
Ekupheleni kwe-lens kune-rim emnyama. Amalensi athandwa kakhulu - "U-Black Night". Lezi shades ezilandelayo nazo ziyathengiswa: i-pearl gray, eluhlaza, i-violet, i-cornflower eluhlaza okwesibhakabhaka, isibhakabhaka esibhakabhaka, i- nutmeg, i- amethyst.
Ama-lens ombala "Amabala Ophthalmic" awafani kakhulu nawo wonke ama-lens ajwayelekile. Imithetho yokugqoka ijwayelekile. Ukuthi inqubo yokugqoka ayiphuzi, kunconywa ukuthenga ama-tweezers akhethekile. Ngaphandle kwalokho ungasebenzisa i-lens, ngaphandle kokugeza izandla zakho ngesepha noma ngesisombululo esikhethekile se-antibacterial. Isikhathi sokugqoka sixhomeke ekuziphatheni komuntu ngamunye. Ekubukeni kokuncane kakhulu, akufanele ugqoke ama-lens ophthalmic Colors. Impendulo evela kwamakhasimende athile, noma kunjalo, isikisela ukuthi izinzwa ezingathandeki zidluliselwe ukuphathwa okulula - i-lens iphuma. Ukugcina amalensi asuswe ubusuku kumele abe esitsheni esikhethekile esineketshezi.
Ukubuyekeza mayelana nokufaneleka
Ngomunye umuntu, ukubuyekezwa okunjalo kubonakala kungalungile. Kungenxa yemvelo yeminye imibala nokubukeka kwemvelo. Kumele kuqashelwe ukuthi ukunyakaza okumnyama kusenza kube nomphumela "we-puppetry", kodwa futhi kwandisa ubukhulu bamehlo nawo. Umdwebo wokuqala ufana ne-iris yemvelo.
Ngakho-ke, ngezinye izikhathi, ngisho nokuhlolwa okuphelele, kunzima ukucacisa ukuba khona kwe-lens. Ama-lens okuthinta amabala "Ama-Ophthalmics Colors" ayinayo imingcele ecacile phakathi kwengxenye evulekile yomfundi nombala wemibala, futhi lokhu kufaka nokubukeka okujwayelekile kwe-iso.
Abesifazane abaningi baqokomisa ngokukhethekile i-lens "Black Night". Lapho ugqoke lo mthunzi, amehlo abukeka ekhudlwana futhi echaza kakhulu. Abanikazi bezingane ezikhanyayo babike ukuguqulwa kokuqala kombala wabo phakathi nendawo yomfundi endaweni emnyama egcwele eduze komphetho wendilinga. Kodwa kufanele sicabange ukuthi le nhlanganisela ayibheki ngokwemvelo. Abesifazane abanamehlo aluhlaza "Black Night" bazobheka ngokungapheli.
Ukubaluleka okubalulekile yisikhathi sokugqoka (izinyanga ezintathu). Phakathi nalesi sikhathi sonke, ama-lens awaqothuliwe futhi awaqedi.
Impendulo mayelana nokungaphumeleli
Ukubuyekezwa ngomshado akuvamile, kodwa kusekhona. Ungathola ithiphu lapho ilensi eyodwa ihlezi kahle futhi ingazizwa ingakhululekile, kodwa enye ayihambisani nosayizi. Amalensi "Amabala Ophthalmic" awafani nabesifazane abaningi ngenxa yokungakwazi ukuwagqoka emakamelweni anomswakama ophansi. Ezitolo nakwamanye amahhovisi anomoya omile, amehlo aphenduka obomvu.
Amanye amantombazane afuna ukuguqula amehlo abo amnyama abe yibala elihlaza okwesibhakabhaka noma elimpunga futhi athukuthele kakhulu uma engayitholi umbala oyifunayo. Ngesikhathi esifanayo, umbala uguqulela emasontweni ajwayelekile futhi akubona bonke abesifazane abakulungele ukubekezelela lokhu. Kudingekile ukuba ufinyelele umbuzo onjalo ngokwanele njengokushintsha kwekhadidi kumbala futhi uqonde ukuthi amehlo amnyama angeke aphenduke isibhakabhaka-aluhlaza ngaphandle komthunzi womthunzi womdabu.
Ubukhulu nobukhulu be-lens nakho akujabulisi wonke umuntu. Abaningi abazange bakwazi ukufaka ilensi esweni. Yiqiniso, konke kuxhomeke ekuziphatheni komzimba, kodwa i-lens "Ophthalmix" ngenxa yesikhathi sokugqoka esikhudlwana likhulu futhi likhulu.
Yini ehlukile kwamanye amalensi
Abantu abathanda ukuzama imikhiqizo ehlukene futhi bathole okudingayo, shiya ukubonakala kwabo bese beqhathanisa ama-lens we-Ophthalmic Colors namanye amalensi avela kwabanye abakhiqizi. Nakhu ukuthengwa kwabathengi be-lens:
1. Ukungabi nomoya okwanele ukuphelela.
2. Ngokugqoke isikhathi eside, amehlo abukeka ekhathele futhi avuliwe.
3. Inqubo ende yokugqoka ama-lens.
Ama-lens othintana nabo "Imibala Ye-Ophthalmic" inezici ezinhle uma kuqhathaniswa namanye ama-lensi. Ngama-minus nama-pluses, intengo ye-Ophthalmix ihambisana nekhwalithi futhi ayibangeli ukudideka phakathi kwabathengi. Emgqeni wembala kunezithunzi ezimnandi ongazitholi nabanye abakhiqizi. Isikhathi sokugqoka siside ngokwanele - izinyanga ezintathu.
Izinkinga ekusetshenzisweni kwamalensi
Kunzima ukuvela ngenxa yezinto eziguquguqukayo ze-Ophthalmic Colors lens. Ukubuyekeza kusho ukuthi amantombazane angasebenzisa indlela yokufaka amalensi mayelana nengxenye yehora. Ngemuva kokusebenzisa isikhathi eside, i-lens yoma futhi kufanele ibuye iphonswe ngesixazululo. Ngokuvamile kunezimo lapho i-lens ihlezi esweni ngecala elingalungile. Abanikazi bayiqaphele ukuthi umehluko phakathi kwezinhlangothi zensimbi awubonakali. Kodwa emva kwezinsuku ezimbalwa zokuhlukunyezwa, abanikazi bama-lens bathola ikhono elithile, futhi inqubo ithatha isikhathi esincane.
Okokuqala, ngaphambi kokuthenga, udinga ukuxhumana nochwepheshe bese uthola ukuthi kukhona yini okuvunyelwe ngabanye. I-ophthalmologist izokusiza ukuthi ukhethe i-diopter efanele yokubonisa umbono, uma kudingeka. Kukhona uhlu lonke lwezingqinamba. Nazi ezinye zezimo lapho ukugqoka kwanoma yiliphi lens kuvinjelwe noma kubuzwa:
Izinqubo zokuvuvukala kwamajwabu amehlo;
Isifo seso esithathelwanayo;
Yini engingayisho ekugcineni
Kunzima ukuthola umuntu ozogculiseka ngokuphelele ngokubonakala kwakhe. Ubungako nokuma kwezindlebe, impumulo, isikhumba - konke lokhu kuvame ukulungiswa ngokuhlinzwa emitholampilo ye-cosmetology. Kodwa ungashintsha kalula ngaphandle kokusebenzisa usizo lomese wokuhlinza, isibonelo, ngokushintsha umbala wamehlo.
Yini abesifazane nabesilisa abathile abayifunayo ngokugqoka amalensi okuxhumana anemibala? Okokuqala, ukufihla umbala wakho wemvelo bese uthole into emisha kakhulu. Okwesibili, bafuna umbala ukufanisa ukubukeka kwawo ngendlela engokwemvelo kakhulu. Kukhona labo okuphambene nalokho okungafani nokuphuma esixukwini futhi akudingeki ukuba amehlo abo abukeke emvelo. Abathandi be-exotics nabangewona ama-formalist bakhetha ukugqoka ama-lens okukhumbuza abafundi bezilwane futhi babe namaphethini.
Kunoma yikuphi, ukugqoka ama-lens akulimazi empilweni uma kuqhathaniswa nemiphumela yeminye imisebenzi engaphumeleli. Ngakho-ke, ngale ndlela yokushintsha ukubukeka, mhlawumbe okungenacala kakhulu. Yiqiniso, uma uhambisana nayo yonke imithetho yokugqoka futhi uxhumane ne-ophthalmologist ngaphambi kokuthenga. Amalensi oxhumana nombala "Ophthalmics Colors" ane-palette ecebile yama-shade yamehlo futhi akwazi ukushintsha ukubonakala, ngakho-ke, ezoletha imizwa eminingi emihle kumnikazi wawo.
Inkinga evamile esikhathini sethu ukukhathala kweso
Odokotela basusa ama-lenti angu-27 othintana naye
Amaconsi e-Eye "Oksial": ukubuyekezwa, imfundo, izifaniso
Ukondla utamatisi kule abamba ukushisa: Izincomo
Kalamula: umonakalo futhi inzuzo, izakhiwo
Kahle bahlanganise into yokutadisha - is ukunquma indlela efanele konke imisebenzi yesayensi
Alexander Zaldostanov: Biography, ukuphila siqu. umsebenzi okhokhelwayo
Balms "Revival" - amandla iodine
"Mercedes Vario": incazelo, imininingwane, izithombe
Ukwelashwa ngedivayisi "Stiotron" - isehlukaniso? Izibuyekezo kodokotela abathengi, yokusetshenziswa, izinkomba